UAngela-Ufuna uMthandazo-ukubala usiya eBukumkanini
Angela - Ufuna Umthandazo
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Simona nge-26 kaJuni, 2020:
Ngale njikalanga kuvele uMama wethu waseZaro. Wayenxibe ezimhlophe zonke, ingubo awayezisonge ngayo iblue, kwaye wayenengubo emhlophe entloko. Esifubeni sakhe wayenentliziyo yeentyatyambo ezimhlophe, iinyawo zakhe zazize kwaye unyawo ngalunye lwaluneentyatyambo ezimhlophe. Iingalo zakhe zazivulekile ukubonisa ukuba wamkelekile. Kwisandla sakhe sasekunene unerosari ende emhlophe emhlophe, ngokungathi yenziwe ngokukhanya. Ubuso bukaMama babuhlungu kodwa wayefihla ukudana kwakhe ngoncumo oluhle. Ngasekunene kukaMama inguMichael oyiNtloko iNgelosi enkulu njengenkokeli enkulu kunye nezikali esandleni sakhe sasekunene. Makadunyiswe uYesu Krestu…
Bantwana abathandekayo, ndilapha kwakhona phakathi kwenu kwihlathi lam elisikelelekileyo. Bantwana bam, namhlanje ndiyavuya kunye nani kwaye ndiyathandaza kunye nani ndinithandazela. Bantwana abaziintanda, namhlanje ndiyanimema kwakhona ukuba nithandazele iCawe yam endiyithandayo: thandazani, bantwana! Bantwana bam, njengokuba umhlaba ufuna umbethe ukuba uhlaziyeke kwaye uhlambe, nawe ke kufuneka uthandazwe. Sukukholelwa ekubeni ungazisombulula ngokwakho iingxaki zakho; elowo kuni kufuneka azithembise kwaye athembele kuThixo-nguThixo kuphela onokukusindisa. Nguye kuphela iankile yosindiso. Bantwana, umhlaba ufuna umthandazo omninzi: umthandazo owenziwe ngentliziyo, hayi ngemilebe. Bantwana bam, zinikeleni kwintliziyo yam engenasono, nizizilise entliziyweni yam, nantsi indawo yethu sonke. (Umama ubonakalise intliziyo yakhe). Bantwana bam, namhlanje ndiyanimema ukuba nenze imisitho yomthandazo-Umthandazo uyafuneka ukuze nizomele: nindimamele! Bantwana, bondleni eLizwini likaThixo, kwaye ndiyanicela ukuba ningashiyi iisakramente. Bantwanana, maxesha anzima anilindeleyo; Kuya kufuneka woyise izilingo ezininzi, kodwa ukuba awuzimaseki elukholweni, awuzukukwenza. Izilingo ziya kukuchitha umzamo, kwaye ukuba awundimameli, ungaba lixhoba lotshaba olusebenzise ukudinwa kwakho kunye nobuthathaka bakho bokwenza uwe.
Emva koko uMama wandicela ukuba ndithandaze naye, kwaye ekugqibeleni ndaye ndancoma kuye bonke abo bazincomayo emithandazweni yam. Ekugqibeleni wamsikelela.
← Sebenzisa ntoni?
Luz de Maria - uYesu… →